Makemikari Zvigadzirwa Vagadziri - China Compound Zvigadzirwa vatengi & Factory
Jelly upfu chakagadzirwa carrageenan, konjac chingamu, shuga uye zvimwe zvokudya mbishi zvinhu, zviri yakananga mhinduro kugadzira jelly. Nekushandisa carrageenan yakasanganiswa nezvimwe zvinoshandiswa, iyo jelly poda inogona kuve nehunhu hwekugwamba, kuchengetedza mvura uye inoita kuti jelly riwedzere kupfava. Jelly upfu mhando yepamusoro yezvokudya fiber ine hupfumi hwemvura-inogadziriswa semi-fiber, iyo yakaziva basa rekuchengetedza utano kumba nekune dzimwe nyika. Iyo inogona kunyatso kudzinga inorema simbi maatomu uye radioactive ini ...
Poda inotapira yemapipi inowanzo kuve gel yemubatanidzwa, yakafanana nekushandisa kwezvinodyiwa mujelly, agar-yakavakirwa poda yehwitsi ine simba rakanyanya rejel. Izvo zvinokwanisika kugadzira zvinyoro nyoro zvine yakasimba gelatinization, yakajeka pachena, yakajeka sekristaro, yakasimba elasticity uye yakashata kuravira nekubatanidza agar-agar, carrageenan uye zvimwe zvinongedzo. , kujekesa kwakanaka, diki yekuwedzera huwandu, yakaderera mutengo, kugadzirisa ...
Beer Kujekesa Mumiriri inotorwa kubva kumusoro kwemhando yegungwa algae. Sechigadzirwa chechisikwa chakasvibirira, kuchengetedzeka kwayo kwave kugamuchirwa neUnited Nations Chikafu Chekurima Sangano. Iko kushanda kweiyo wort kujekesa mumiriri kutora mapuroteni ewort, kubvisa congealable nitrogen, kujekesa doro uye kudzosera pasherufu hupenyu hwehwahwa. Iyo inomiririra doro ine mhando mbiri: granules nehupfu. Iyo ine hunhu hwekushandisa kuri nyore, yakaderera mutengo uye yakajeka mhedzisiro, uye inogona kunyatsoita nani iyo no ...